Ogaden News Agency (ONA) – Dhalin 1000 Kabadan oo Gobolka Axmaarada Lagu Jidh-dilay.
Dhalin 1000 Kabadan oo Gobolka Axmaarada Lagu Jidh-dilay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay ciidanka gumaysigu todobaadkan kuxidheen in kabadan 1000 dhalin yaro ah oo udhalatay qoomiyada Axmaarada.
Sida xogta aan kuhelayno dhalintan ayaa laqaqabtay xili ay nolol maalmeed kooda soo dhacsanayeen, waxaana lasheegayaa in loogaystay jidh dil aad ubadan mudadii ay xabsiga kujireen.
Qaar kamid ah dhalinta lamaxaabiisay oo dacwad dheer kadib jeelka lagasiidaayay ayaa sheegay in ciidanka wayaanuhu ay jidh dil ba’an ugaysan jireen hadh iyo habeenba, waxayna dhalintu sheegeen in lawaydiin jiray taageerada ay uhayaan jabhadaha wadanka kadagaalama.
Dhalintan oo sida lasheegay 1000 kabadan ayaa looxidhay qoomiyada ay kadhasheen oo kaliya, waxaana lasheegay in ay Gobolka Axmaarada ku xidh xidhan yihiin kumanaan kale oo udhashay qoomiyada Axmaarada kuwaas oo lagu eedeeyay in ay kacdoono kala horyimaadeen taliska wayaanaha.
Sidoo kale waxaa guud ahaan wadanka Itoobiya kajira guux wayn oo saamayn kuyeeshay siyaasada wadanka gumaysiga Itoobiya, dhulka Oromia ayaa kamid ah meelaha ugu daran ee ay kajiraan kacdoonada lagu diidan yahay kooxda TPLF.
Hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa dhankooda eedayn wayn dusha usaaray kooxda TPLF iyo guud ahaan taliska wayaanaha, waxayna hay’aduhu sheegeen in lagaadhay xiligii isla xisaabtanka waxayna hay’adu sheegtay in loobaahan yahay qorshihii maxkamad lagusoo taagi lahaa qofkii tacadiyo gaysta.